Waraabe [Sheeko Gaaban]WQ.Maxamed C. Xasan ”Alto” – Idil News
Waraabe [Sheeko Gaaban]WQ.Maxamed C. Xasan ”Alto”
”Habaar in uu i haysto baan ka baqsanahay. Haddaan ahay Waraabe, maxay tahay musiibadani oo Maalig kelidey uun igu salliday?” Dhurwaa ayaa su’aalay, isagoo la warramaya Naftiisa. ”Duurjoogta kale hooggani ilama qabaan. Maxaan taa ku galabsaday oo ku mutaystay?”
Waxay ugu jawaabtay: ”Ma jiro, innaba ha yaraatee, waxaad kaga duwan tahay dugaagga kale. Ma garan karo, anigu, oo iima muuqdaan waxa kelidaa ugu fongoran tahay. Iyada cuqubo, warkeeda daa! Waalidkaa inuu kuu duceeyo mooyee, abidkii kuma habaarin. Inanyahow, waxaad wadatid waa daandaansi iyo kibir! Is qaboojiyoo shayddaanka iska naar!”
”Naa, ma ismagangadaysaa?”
Sayte, ”war isyeelyeeli maayee, iga dhab weeye. Waad i taqaan, likaacada iyo jeesjeeska ma aqaan. Waxaad ka mid tahay, naflayda duurjoogta ah kuwa ugu magacyo dhaadheer oo wanwanaagsan. Koonka aynnu saarannahay ma jidho kob aadan caan ka ahayn.”
”Ma imminkaad hiyiwaale ila soo doonatay?” Waraabihii oo jawaabta Nafta la amakaakay ayaa weyddiintuna ka timi. ”Annagaa belaayo … Huuno! … Ma waalatay, mise waad soo waddaa? Habeen soo gala iyo waa guduutaba, waxa aflaggaaddo iyo hadallo qoonsimaad iyo quursad laygu hayo, sowyadaa goor kasta ku soo gaadho maaha? Wax kale iskaba daayoo, sow garan maysid inta magacyo qalqallafsan la ii bixiyey oo maanta dunidoo dhan iigu maadsato? Waa yahaye, aan kuu tirsho: Cumar, Dhurwaa, Qaaryare, Waraabe, iyo kuwo kaloo fara badan. Bal ka sifaalee oo ii sheeg, naflayda kale oo intaas isimmood leh! Magacyada dhawaaqoodu, waliba, ma laha diirnixid oo maaha kuwo ku soo jiidanaya.”
Kute Naftii, ”arrinku hadduu caynkaa yahay, maad ka gilgilatid, maxaase meesha ku dhigey?”
”Xaajadaba waxaan u soo gundhiyey,” Dhurwaagii baa xanaaqii ka yara dhacay, kolkay ku giijintii Naftu ka debcisey, ”inaan kula socodsiiyo ayaan damacsanaa in duurjoogta kale aan isugu yeedho oo la garnaqsado. Waxaan ku talaggalsanahay oo ku odhan doonaa: ´Nooluhu waxay iga qabaan fekred khaldan. Sumcad xumo ayaa meel kasta lay mariyey. Maanta iyo wixii ka dambeeya Aammin ha la iigu yeedho oo magacyada kale ha layga daayo!’ Maxay kula tahay?”
”Talo wacan weeye,” Naftii ayaa ku warcelisey.
Durduri oo wuxuu isugu yeedhey dhammaan wixii Habar Dugaag ku abtirsanayay. Xaalkii ayuu u tebiyey. Kolkii hore, waa lays dhugtay oo hoostaa layska qandhuuftay. Markii xigey, mid ka mid ah baa yidhi, ”codsigaagaas waxba kama qabno’e, balse in layska kaa hubiyo weeye; waxaad yeeshaa, bal qabo, Hashatan iyo Nirigteeda, arrooryadiina kuugu nimaadno!”
Duurjoogtii subixii bay ku soo laabteen, mise Nirigtii bishmahaa go’an, Hashiina naasahaa maqan. ´Maxay ka nuugtaa amase ku nuugtaa!’
Dhurwaagii baa intuu qoslay oo iska dhaqaaqay yidhi: ”Waligiinba Aamminow, gura! Sow ima barataan?”
Helsinki, Finland, 25.05.1997